Dr. Tint Swe's Writings: April 2020
အော် တကိုယ်ဆွေးဘွယ်၊ မြောင်ခင်တန်းနှင့်၊ တောင်ကမ်းကွယ်၊ လမ်းဘယ်ဝယ်ရှိ၊ နယ်ရှစ်ခွင်လုံး၊ တိမ်မင်တုံး၊ မိုးလုံးအိလို့၊ အို သိတတ်ပြီ၊ မြိုင်ခြေအုပ်က၊ ရွှေဘုတ်ကယ်အီသည်၊ ဌာနီပြည်ကြီးကလဲ ဝေးသနှင့်။
ငုံကင်းငယ်ပန်းမန်၊ ရွက်ရင့်လျှောလို့၊ ရွက်ကြောငယ်လှန်သည်၊ တောင်ပြန်လေညင်းကလဲ သွေးသနှင့်။
သူရကန်စက်၊ ဖန်ဂယက်လဲ၊ လယ်ချက်ဗဟို၊ ယုဂန်စွန်းက၊ တိမ်ကွန်းငယ်ခိုသည်၊ ချိန်ညို နေမင်းကလဲ ဧသနှင့်။
နောင့်ဆွေးငယ် ဗျာဝှန်၊ လွန့်ထက်လွန်ကို၊ တသွန်ကူလှောက်၊ ဘယ်ဖြေဆည်ဖျောက်နိုင်လိမ့်။
တောမျောက်က ကြိုးခွေ၊ စိမ့်ကြီးမြိုင်ချောင်မှာ၊ ရွှေဖိုးခေါင် သံချိုညောင်း၊ ဒေါင်းက အိုးဝေ။
တောင်တံပြက်၊ ကျောက်စက်ကျ ဝမ်းရေ၊ တွေတွေစိမ့်ကြည်ဧ။
အို နောင့်တဲဟာမို့၊ ရွှေသဲမှာ ကြွေကြွေဆူလှတယ်၊ နန်းသူကြောင့်လေး။ ။
ဦးကြင်ဥရေးတဲ့ ပဒေသာသီချင်းများ စာအုပ်ကို ၁၉၆၁ ခု ဇူလိုင်လမှာ ထွန်းထွန်းကုမ္ပဏီအတွက် မေပုံနှိပ်တိုက်မှာ ရိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရှစ်တန်းမှာ သင်ယူခဲ့ရတယ်။ အတော်များများ အလွတ်ရသေးတယ်။ အကုန်တော့ မရတော့ပါ။
စာသားတွေရော သတ်ပုံတွေပါ လွဲပြီးရေးထားတာတွေ အများကြီးတွေ့နေရတယ်။
အော် တကိုယ်ဆွေးဘွယ့့်
မြိုင်ခြေအုပ်က၊ ရွှေဘုတ်ကယ်အီသည်၊ ဌာနီပြည်ကြီးကလဲ ဝေးသနှင့်။
အော် - ဖော်ဝေးမစုံ၊ ဆွေးဘို့ကြုံအောင်၊ တပုံတခန်း၊ ကဆုန်ဆန်းမို့၊ ယုန်စန်းငွေလ၊ စန္ဒရနှင့်၊ ပုဏ္ဏာ့တာရာ၊ ကြယ်ဝိသာလဲ၊ အာကာမြင့်ခေါင်၊ ကွန့်ရွှန်းငယ်ပြောင်သည်၊ တိမ်မှောင်ချွေလို့ လင်းတော့တယ်။ ။
သံဝှန်ငယ်ညောင်းငြိမ့်၊ စည်မောင်းလှိမ့်လို့၊ ဝတိန့်ခွန်ဆွတ်၊ နတ်များထွက်ကို၊ သခွတ်စားငယ်၊ ပြည်သမီးရင်း၊ လက်စကြွင်းကြောင့်၊ ရန်တင်းငယ်လှယ်သည်၊ စစ်ဆွယ်ပြိုင်လို့ ကျင်းတော့တယ်။ ။
သင်းမြေနံ့တကြိုင်၊ ။ စကားရွှေဝါနှင့်၊ ညောင်သီဒါ ရေတော်သွန်းချိန်မို့၊ ရွှန်းဝေလို့လှိုင်၊ ။ မြိုင်မြစ်စုံ ယမုန်ခ ပါတဲ့၊ ပြည်အမရမဏ္ဍိုင်၊ ခရိုင်နယ့်တဝိုင်း၊ ။ သို့ချိန်ဆီ၊ ရင့်ကျူးပဉ္စင်္ဂီနှင့်၊ တိမ်ပန်းချီ ပွေလို့ ရေးပေလိမ့်၊ ဆေးရင့်ပြာလှိုင်း။ ။
နံကိုင်းဇေယျ၊ ပြည်သန်လျက်ခုံ၊ ကြက်နှစ်စုံလဲ၊ ရွှေပုညနှင့်၊ ပတ္တမြာ့စစ်၊ ပြာယမိုက်ဆင်၊ မန်းသိုက်ဝင်တဲ့၊ ရှင်ပင့်ဖြစ်ကို၊ စိစစ်ဖွဲ့ကုံး၊ အိုဘယ့်နှယ်ဆုံးပေလိမ့်။ ။
ခွေနှုန်းတဲ့ဗျာသီ၊ ။ သူလဲ မြင်တော်လာနှင့်၊ ကန္တာမှာ ဖန်ရာကြုံ့ပါဘိ၊ လွမ်းပုံ့ပွေလီ၊ ။ ထီးတရာ ပဏ္ဏာကြို့ပါတဲ့၊ မင်းနေမြို့ဋ္ဌာနီ၊ သည်ဆီထင့် ရော်ရမ်း၊ ။ နယ်ရှစ်ခွင်၊ နတ်စစ်ကယ်ဗျူဟာဆင်လို့၊ မြော်အမြင်ထင်အတွေးနှင့်၊ ဝေးက မောင်ပန်း။ ။
ထီးတရာ ပဏ္ဏာကြို့ပါတဲ့၊ မင်းနေမြို့ဋ္ဌာနီ၊ သည်ဆီထင့် ရော်ရမ်း၊
မြော်အမြင်ထင်အတွေးနှင့်၊ ဝေးက မောင်ပန်း။
မသိလို့မေးပါရစေဆရာခင်ဗျား။ Corona ၏မူရင်းအသံထွက်အမှန်သည် ကရိုနာလား၊ ကိုရိုနာလား၊ ကော်ရိုနာလား ခင်ဗျ။ အသံထွက်က kuh row nuh တဲ့။ ကိုရိုနာမဟုတ်တာတော့သေချာတယ်။ ကျနော်တော့ ကော်ရိုနာလို့သုံးပါတယ်။ အကြုံပြုပေးပါဆရာ။
၁။ kr·ow·nuh ကရိုနာ
၂။ https://www.youtube.com/watch?v=nN9OEQK3eHM ကိုရနာ
၃။ https://www.youtube.com/watch?v=_qnKoRVXG6M ဝူဟန် (ဝူဟိုင်း) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်
ကျွန်တော်က သတင်းစထွက်ကတည်းက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လို့ ရေးခဲ့တယ်။ အမေရိကန်တီဗွီတွေက ကရိုနာ သံထွက်တာ သိလာတော့ ကရိုနာလို့ ပြင်ရေးတယ်။
အခုမေးခွန်းလာတော့ ထပ်စစ်တယ်။ သုံးမျိုးတွေ့ပါတယ်။ ယူကျုမှာ အသံထွက်သူတွေက မတူကြလို့ ထင်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ ငပိစားသူတွေက ကို တို့ မ တို့ကို ကိုယ့်အသံထွက်ကိုသာ တစ်တစ်ခွခွ ထွက်ကြတယ်။
ကျွန်တော်က နေထိုင်ရာတိုင်းပြည်ကအသံထွက်ကို အတုခိုးရတယ်။ မဟုတ်ရင် နားလည်ကြမှာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ခက်တယ်။
၁။ ဂျွန်ဟော့ပကင်းယူနီဗာစတီအဆိုအရ ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 3.2 million သန်းအနက် 1,004,483 ယောက် သို့မဟုတ် ၃ ပုံ ၁ ပုံဟာ သက်သာပျောက်ကင်းကြပြီ။
၂။ အမေရိကန်သမတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ တရုပ်ပြည် Wuhan lab ဝူဟန်ဓါတ်ခွဲခန်းနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ သက်သေတွေ့ရတယ်လို့ ကနေ့ပြောလိုက်တယ်။
၃။ UK ယူကေမှာ ထိပ်ဆုံးကနေ ကျော်လွန်လာပြီလို့ ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောလိုက်တယ်။
၄။ ရုရှားဝန်ကြီးချုပ် ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရ။
၅။ Pfizer ဆေးကုမ္ပဏီက ၂၀၂၀ ခုနှစ်အကုန်မှာ ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး ဒို့စ်ပေါင်း 10-20 million သန်း ထုတ်ရန် မျှော်မှန်းထားတယ်။
ညနေ ၇ နာရီ ၂၆ မိနစ်။
ကျွန်တော်က အကောင်တွေ မမွေးပါ။ အကောင်ရောဂါတွေလည်း မကုတတ်ပါ။ ကွန်မင့်မှာ အကောင်ရုပ်တွေ လာတင်တိုင်း ဖျက်တယ်။ တချို့က အလွန်သဘောကျတယ်။ အိမ်မှာမွေးထားကြတယ်။ အဲတာကို ပြောရန် မရှိပါ။ ကျွန်တော့်အိမ်ကိုသာ အကောင်လာမပို့ပါနဲ့။
ကျွန်တော်က ပေါ်လစီအရ ပလီပြင်ထားတဲ့သတ်ပုံကို သဘောမတူပါ။ သူများတွေက အဲလိုရေးကြတယ်။ အဲတာတွေကို ဝယ်ကြတယ်။ ကျွန်တော့စာအုပ်စင်မှာ တင်မထားပါ။
အရုပ်တွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ ကျွန်တော်က ရွံ့ရုပ်ကို ကိုယ့်လက်နဲ့လုပ်တဲ့လူ။ အင်တာနက်လမ်းပေါ်အရုပ်တွေ ကိုယ့်အိမ်မှာသာ ကစားကြပါခင်ဗျား။
Coronavirus Vaccine ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး ကြာတော့မည်မဟုတ်
ဇန္နဝါရီလမှာ ရမည်။ ကနေ့ထွက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းက ကာကွယ်ဆေးထိုးနေပါသတဲ့။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ။ မဟုတ်ပါဘူးပြောတာမရလို့ အတော်များများကို ဘလော့ လိုက်ရတယ်။ အင်တာနက်လမ်းမပေါ်က ကောက်ယူလာတဲ့ပုံတွေနဲ့ လာငြင်းကြလို့။
ဆေးကုမ္ပဏီတွေ တဒါဇင်လောက်က ကြိုးပမ်းနေကြတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရက ဘယ်ကုမ္ပဏီရယ်လို့ မရွေးသေးပါ။
မနေ့ကသတင်းအရ Remdesivir ကုသဆေးကလည်း ရောဂါပျောက်ကင်းချိန်ကို ၃၁% ရက်တိုစေတယ်။
ကာကွယ်ဆေးထုတ်နိုင်တာကို မြန်ဆန်စေအောင် သမတကနေ Operation Warp Speed အမိန့်ပေးရတယ်။ ကာကွယ်ဆေးတိုင်းကို မြန်အောင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဟာ အန္တရာယ် မကင်းပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကာကွယ်ဆေးတခု ထုတ်တာ ၁၂ လကနေ ၁၈ လအထိကြာတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန္နဝါရီလထဲမှာ ဆေးဒို့စ် သန်း ၃၀၀ ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်လို့ Dr. Fauci ဒေါက်တာဖေါ်ချီက မနေ့က ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးထုတ်နေတာတွေထဲမှာ Johnson & Johnson, Moderna နဲ့ Oxford University တွေ ပါဝင်တယ်။
၁။ ဆရာရှင့် Vit D (25-OH) စစ်တာ အဖြေမှာ 19.16 ng/ml က အသက် (၃၁)နှစ်အရွယ် မိန်းမတဦးအတွက် Vit D ဓါတ် တော်တော်များ ချို့ယွင်းနေပါပြီလား သိချင်ပါတယ်ရှင့်။
30 ng/ml အောက် နည်းနေသည်။
30 – 39 ng/ml လုံလောက်။
40 – 59 ng/ml အသင့်မှန်ဆုံး။
60 – 100 ng/ml ဆေးကုသရန်လိုအပ်။
100 ng/ml ထက်ကျော်သူ များလွန်း။
၂။ ကျွန်မ အဖေကအသက် ၆၂နှစ်ပါ။ သွေးတိုး ဆီချိုရောဂါရှိပါတယ်။ FB မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အားဆေး ဖြည့်စွက်စာလို့လည်းပြောတဲ့ D3 နဲ့ Super K နှစ်မျိုးကို သောက်မလို့ဆိုပြီး ဝယ်လာပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ အဲ့ဒီဆေးတွေအကြောင်းလည်း သေချာမသိတော့ အဖေ့ရောဂါတွေနဲ့ မတည့်မှာလည်းစိုးရိမ်ပါတယ်ရှင့်။ အဖေကတော့ ပြောလို့မရပါဘူး သောက်နေပါပြီ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဆရာအနေနဲ့ ဆေးအကြောင်းကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးလေးတွေကို မျှဝေပေးပါဦးဆရာရှင်။့ ကျွန်မကိုလည်း အဖေက အတင်းသောက်ခိုင်းပါတယ် ကျွန်မက အသက်၃၅နှစ် အိမ်ထောင်နှင့် သားတယောက်ရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဆေးအကြောင်းလေးရှင်းပြပေးပါဆရာ။ ကျေးဇူးပါဆရာ။
၃။ ဆရာရှင့် မင်္ဂလာပါ။ အခု fb ပေါ်မှာ ဆရာဝန်မကြီးတယောက်ရဲ့အာဘော်ကြောင့် ကင်ဆာလူနာ တော်တော်များများ Vitamin D3 ကို တနေ့ 10000IU နဲ့ Vitamin K ကိုမဖြစ်မနေသောက်သုံးရမယ်ဆိုပြီး သောက်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ နောက်ထပ် recurrence ပြန်မလာအောင်လို့ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒါ ဟုတ်ပါသလား။ ကျွန်မတို့ ကင်ဆာကုသပြီးသူ လူနာတွေအနေနဲ့ တကယ်ပဲသောက်သင့်ပါသလား။ ကျွန်မတို့ကို ကုသပေးတဲ့ စင်ကာပူက ဒေါက်တာတွေလဲမညွှန်ကြားလို့ ဒွိဟဖြစ်နေရပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။
ခဏခဏရေးရတယ်။ FB မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဆိုတာ လူ ၂ ယောက်ထက်ပိုပြောတာကိုခေါ်တယ်။
D3 ဆိုတာ ဗီတာမင်ဒီနဲ့ Super K ဆိုတာ ဗီတာမင်ကေဖြစ်တယ်။ ဗီတာမင်ဒီဟာ အရိုးတည်ဆောက်ရာမှာ အသုံးဝင်တယ်။ ဗီတာမင်ကေကို တချို့ သွေးထွက်ရောဂါအတွက်ပေးတယ်။ ဗီတာမင်ဒီနည်းတဲ့လူကြီးတွေမှာ Osteomalacia အရိုးအားနည်းရောဂါရနိုင်တယ်။ အရိုးတွေနာမယ်။ ကြွက်သားတွေ ကိုက်ခဲနေမယ်။ ဗီတာမင်ဒီနဲ့ ကယ်လ်စီယမ် အချိုးအဆတော့ မှန်ရပါမယ်။ ကယ်လ်စီယမ် များလွန်းရင် နှလုံးနဲ့ ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်စေမယ်။
ဗီတာမင် (ဒီ) ဟာ အဆီမှာပျော်ဝင်တဲ့ စတီရွိုက်ဖြစ်တယ်။ နေရောင်ခြည်ကနေ ဗီတာမင် (အေ) ကို အလိုအလျောက် (ဒီ) ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးနေတယ်။ နေရောင်အသင့်အတင့်ရနေသူများအဖို့ ဗီတာမင်ဒီ သောက်စရာမလိုပါ။ ဗီတာမင်ဒီမှာ ၁-၂-၃-၄-၅ ဆိုပြီး ရှိသည်။ ၂ နှင့် ၃ ကပိုအရေးတယ်။ Calciferol လို့ ခေါ်တယ်။
ကယ်လ်စီယံနှင့် ဖေါ့စ်ဖါးရပ်စ်ဓါတ်ဆားတွေ ပျော်ဝင်သွားအောင်နဲ့ အူကနေစုပ်ယူစေရန် ဗီတာမင် ဒီက လုပ်ပေးတယ်။ အရိုးအတွက်ကောင်းတယ်။ နည်းနေရင်ကြွက်တက်နိုင်တယ်။ ခုခံအားအတွက်လည်း ပါတယ်။ ဗီတာမင်ဒီ နည်းလွန်းရင် ငယ်လွန်းသည့်ကလေးတွေ အရိုးပြော့ Rickets ရောဂါရမယ်။ အရိုးတွေပျော့နေပြီး ကောက်ကွေးနေနိုင်တယ်။ လူကြီးတွေ Osteomalacia နှင့် Osteoporosis တို့ဖြစ်မယ်။ အရိုးကျိုးလွယ်မယ်။
အသက် ၁၃ နှစ်အောက်5mcg (200 IU) ကစပြီး အသက်ကြီးသူတွေ 10 mcg (400 IU) နှင့် ၇ဝ ကျော်တွေကို 15 mcg (600 IU) ပေးသင့်တယ်။ နေရောင်မရသူများ တနေ့မှာ 25 μg (1000 IU) ပေးသင့်တယ်။
ဗီတာမင်ဒီကြွယ်ဝသည့်အစားအစာတွေက ငါး၊ ငါးကြီးဆီ၊ အမဲအသဲ၊ ဒိန်ခဲ၊ ကြက်ဥအဝါ။
အရိုးကျိုးကာကွယ်ဘို့ရာ Vitamin D 400-1,100 IU ပေးတယ်။ Vitamin D2 300,000 IU ကို တနှစ်တခါ၊ ၃ နှစ်ကြာ သွေးထဲထိုးပေးတယ်။ ဗီတာမင် (ဒီ) နည်းနေတဲ့ရောဂါအတွက် တနေ့မှာ အနည်းဆုံး 1,000 IU (25 micrograms) ပေးတယ်။ ဒိထက်များပြီး နေ့စဉ် Vitamin D 50,000 IU နဲ့ ၆ ပါတ်ပေးပြီး စမ်းသပ်မှုလုပ်တာ ရှိတယ်။ Vitamin D 300,000 IU ကို ၆ ပါတ်တခါ၊ တနှစ်မှာ ၃ ကြိမ်။ အူမကြီးကင်ဆာနဲ့ နှလုံးသွေးကြော ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ဘို့ နေ့စဉ် 1,000 IU ပေးတယ်။ ဆီးချို (၂) အတွက် 400-5714 IU ကို ၂ လကနေ ၇ နှစ်အထိပေးတယ်။ Vitamin D2 ၄ လတခါ 100,000 IU ၂၆ ပါတ်ကြာ။ ဒါမှမဟုတ် နေ့စဉ် Vitamin D3 10 micrograms နဲ့ ၂၄ လကြာပေးတယ်။ သွေးတိုးအတွက် Vitamin D 400-8,571 IU ပေးတယ်။ သွေးထဲ ကယ်လ်စီယမ်နည်းနေသူကို Calcitriol 0.25 micrograms နဲ့ ၄-၈ ပတ်ကြာ။ ဟိုက်ပိုပါရာသိုင်းရွိုက်ရောဂါ အတွက် Dihydrotachysterol 0.75 milligrams ကနေစပေးပြီး 2.5 milligrams အထိတိုးပြီး ရက်ကြာကြာ ပေးတယ်။ သက်သာရင် 0.2-1 milligram နေ့စဉ် ပေးတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Ergocalciferol 50,000-200,000 IU + Calcium lactate4grams of ကို တနေ့ ၆ ကြိမ်လဲ ပေးနိုင်တယ်။ စိတ်မူရောဂါအတွက် 400-800 IU နေ့စဉ် ၁ လကြာ။ ဝတဲ့လူနာတွေကို တပတ်မှာ 20,000-40,000 IU နဲ့ ၁ နှစ်ကြာ။ Multiple sclerosis ရောဂါရှိသေူတွေကို နေ့စဉ် 10,000 IU နဲ့ ၁၂ ပါတ်ကြာ။ ကြွက်သားနာ-အဆစ်နာတာအတွက် နေ့စဉ် Calciferol 100,000 IU နဲ့ ၁၂ လ။ Osteoporosis အရိုးအားနည်တာကို Vitamin D3 5,714 IU ဒါမှမဟုတ် Vitamin D2 10,000 IU နေ့စဉ်၊ ၆ လကြာပေးတယ်။ ပါရာဆိုက်ပိုးဝင်တာကို 40 IU နေ့စဉ် ၅ ရက်။ လူကြီးတွေကို 400 IU of vitamin D + Calcium 800 mg နေ့စဉ်ပေးတယ်။ လူအိုတွေကို Vitamin D3 အပါတ်စဉ် 8,400 IU နဲ့ ၁၆ ပါတ်ပေးတယ်။ Psoriasis အနာ၊ ခရုသင်းနဲ့ Seborrheic Keratosis အတွက် Vitamin D analog Calcipotriene ကို တနေ့ ၂ ကြိမ်လိမ်းစေတယ်။ အသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်တာကို နေ့စဉ် 2,000 IU/kilogram နဲ့ ၃ ရက်ပေးတယ်။ Rheumatoid arthritis အဆစ်နာအတွက် တပတ်မှာ Vitamin D 50,000 IU နဲ့ ၁၂ ပါတ်ပေးတယ်။ တီဘီအတွက် Vitamin D2 10,000 IU တကြိမ် ပေးတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်တာအတွက် Vitamin D 800 IU နေ့စဉ်နဲ့ ၂ နှစ်ကြာပေးတယ်။
ရှားတယ်။ နေရာင်နဲ့ထိတွေ့လို့ မဖြစ်စေပါ။ အသက် ၁၄-၇၁ နှစ်ရှိသူတွေဟာ ခံနိုင်ရည် 4000 IU/day ရှိတယ်။ 1250 micrograms/day (50,000 IU) ကို နေ့စဉ် ကြာကြာသောက်ရင် အဆိပ်သင့်သလို ဖြစ်နိုင်တယ်။ Primary hyperparathyroidism ရောဂါရှိနေသူတွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ Hypercalcemia သွေးထဲမှာ ကယ်လ်စီယမ်များနေခြင်းဟာ Vitamin D toxicity ကိုဖေါ်ပြနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆီးသွားများပြီး ရေငတ်လာမယ်။ မကုဘဲထားရင် ကျောက်ကပ်၊ အသည်း၊ နှလုံးတွေကို ထိခိုက်မယ်။ ၁၂ လ အောက် ကလေးငယ်လေးတွေဟာ အများဆုံးခံနိုင်တာက 25 micrograms/day (1000 IU) ဖြစ်တယ်။ ဗီတာမင် (ဒီ) များလို့ Hypercalcemia ကယ်လ်စီယမ်များတာကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ စားချင်စိတ်နည်း၊ ပျို့မယ်၊ အန်မယ်၊ ဆီးများမယ်၊ အားနည်းမယ်၊ အိပ်မရဖြစ်မယ်၊ စိတ်ဂနာမငြိမ်ဖြစ်မယ်၊ ယားယံမယ်၊ ကျောက်ကပ်အလုပ် ပျက်မယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင်လဲ လိုတာထက် ပိုမပေးသင့်ဘူး။ ကလေးကို သက်ရောက်ပြီး ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ ကလေးတွေမှာ ဥာဏ်ရည်ထိခိုက်မယ်။ အရိုးတည်ဆောက်မှု ထိခိုက်မယ်၊ ဝမ်းလျှောမယ်၊ စိတ်တိုမယ်၊ အလေးချိန်ကျမယ်၊ စိတ်ဓါတ်ကျမယ်။ ဖြစ်သူတွေကို အဲဒီဆေး ၂ မျိုး ပေးနေတာတွေ ရပ်ပြစ်ရမယ်။ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးတာကို ပြန်ပြင်လို့မရနိုင်ဘူး။
နေရောင်အရနည်းတဲ့နေရာဒေသတွေမှာ ဗီတာမင်ဒီနည်းကြတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ နေရောင်နည်းသွားပြီလား မသိပါ။ ကြောငြာတွေမှာရေးတာတွေကို ချင့်ယုံကြစေချင်တယ်။ နည်းနေသူတွေ ဆေးလိုကြတယ်။
1. Calcium (ကယ်လ်စီယမ်) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/calcium.html
2. Calcium blood test (ကယ်လ်စီယမ်) စစ်ဆေးခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/02/calcium-blood-test.html
3. Calcium အမျိုးသမီး၊ ကလေးနဲ့ ကယ်လ်စီယမ် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/calcium.html
4. Cramps ကြွက်တက်ခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/06/cramps_06.html
5. Vitamin D and Flu ဗီတာမင်ဒီ နဲ့ တုပ်ကွေး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/07/vitamin-d-and-flu.html
6. Vitamin D pills could stop colds or flu ဗီတာမင်ဒီကနေ အအေးမိ-တုပ်ကွေးကို ကုသနိုင် http://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/vitamin-d-pills-could-stop-colds-or-flu.html
7. Vitamin D ဗီတာမင် (ဒီ) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-d.html
တစ်ကူး တစ်က တကူး တက ဘယ်အရာက မှန်သလဲ။ဆရာ
စာရေးဆရာဆိုရင် အယ်ဒီတာက အော်တိုမက်တစ်ပြင်ပေးလိမ့်မယ်။ တကို စမသတ်ရင် ဆင်ဆာအဖွဲ့က ထုတ်ဝေခွင့် ပိတ်လိမ့်မယ်။ လွှတ်တော်ကအတည်ပြုမဲ့ ဥပဒေသစ်ထဲမှာရေးလိုတာဆိုရင် မြန်မာစာအဖွဲ့ကိုမေး။ နိုင်ငံတော်မူသတ်ပုံစာအုပ်ထဲမှာ တဝမ်းပူ ၉၀% ကို စသတ်ထားတယ်။ သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှု ဆုံးသွားတာ ၁၉၈၀ ကျော်ကတည်းက။
တကူးတက တခုတ်တရ တတိုင်းတပြည်လုံး https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/blog-post_21.html
• ဆရာ စာအုပ်ငှားရင် ကဒ်နဲ့ ငှားရတာလားရှင့်။ မန်ဘာဝင်ထားတဲ့ လိုက်ဘရီကဒ်ရှင့်။
• မြန်မာပြည်မှာ စာကြည့်တိုက်အင်အားမရှိပါဘူး။ ဂျာနယ်တွေပဲ အားကိုးနေကြတယ်။ အဲတာ ဗဟုသုတ မျက်စိမှုန်နေတာပါဆရာ။
• ဆေးမန်းက စာကြည့်တိုက်အဟောင်းကြီး မှတ်မိသေးလားဆရာ။
• ကျောင်းတွေမှာ စာကြည့်တိုက်ထားပေးတဲ့စနစ်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ရမယ်။
• စာကြည့်တိုက်မှာပဲ စာကိုအေးအေးဆေးဆေးဖတ်ရတာလဲ သဘောကျဖို့ကောင်းပါသည်။
• စာကြည့်တိုက်တော့သဘောကျပါတယ်ဆရာ။ ဖတ်-မှတ်-သိရလို့ပါ။
• ဒီရွာမှာလဲရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်စာကြည့်တိုက် မဟုတ်ဘူး။ စာပိတ်တိုက်။ သွားတိုင်း ပိတ်ထားတာပဲ တွေ့ရတယ်။
• မုံရွာက စာကြည့်တိုက်က နေရာပြောင်းသွားပြီဆရာ။ ရုံးကြီးလမ်းထဲမှာပါ။ နဂိုနေရာကတော့ e-library ဖြစ်နေပါပြီရှင့်။
• ဆရာငယ်ငယ်ကရောက်ခဲ့တဲ့ မုံရွာကစာကြည့်တိုက်လေးကို စာကြည့်တိုကို ပြန်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
ကျွန်တော် အင်ဒီယာနာပုလစ်မြို့ကိုရောက်ကာစ နေရတဲ့အိမ်မှာ အင်တာနက်မတပ်ရသေးပါ။ ဒေလီမှာနေခဲ့စဉ်က ၂၄ နာရီ အင်တာနက်ရှိတဲ့လူဖြစ်လို့ မနေတတ်။ ကျန်းမာရေးမေးခွန်းတွေဖြေစရာ အကြွေးထူနေရင် မနေတတ်ပါ။ အဲတာနဲ့ အနီးဆုံးစာကြည့်တိုက်ကို အားကိုးရပါတယ်။ အိုင်ဒီတခုနဲ့ အိမ်လိပ်စာနဲ့လာတဲ့ စာအိတ်တခုပြတာနဲ့ စာကြည့်တိုက် ကပ်ပြား ၂ ခု ထုတ်ပေးတယ်။ ကပ်ပြားလုပ်ရတာ ၂ မိနစ်သာကြာတယ်။ ပိုက်ဆံလဲမပေးရပါ။ အီးမေးလ်လိပ်စာတော့ ပေးရတယ်။ ပိတ်ရက်နဲ့ စာအုပ်အသစ် ရောက်တာတွေကို အကြောင်းကြားပေးတယ်။ ကွန်ပြူတာတွေလဲရှိလို့ အင်တာနက်ကို ကိုယ်ကြိုက်သလို သုံးနိုင်တယ်။ လက်ပတော့ပါရင်လဲ ပလပ်တပ်လိုက်ယုံဘဲ။ ဝိုင်ဖိုင်ပတ်စ်ဝပ်ဆိုတာ ကပ်ပြားနံပါတ် ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပဲ။ ကျွန်တော် မြန်မာဘာသာပြန်ဆရာလုပ်နေတဲ့ကျောင်းကို စာကြည့်တိုက်မှူးက ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာတွေနဲ့ လာတယ်။ ကျောင်းသားတွေကို တခါတည်း ကပ်ပြားထုတ်ပေးပါတယ်။ ဘာမှပြနေစရာမလိုပါ။
ပုံထဲကခုံထိုင်ပြီးမှာ မြန်မာပြည်က နေမကောင်းလို့မေးကြတာတွေကို ဖြေခဲ့ပါတယ်။
e-library တို့ Online library တို့ကို ကြောက်တယ်။ အဲတာတွေက လယ်တီဆရာတော်ကြီးတို့ ကင်းဝန်မင်းကြီးတို့စာတွေကို ပြင်ပြီးတင်ထားကြတာ။
ဆရာမတဦးက တင်ထားတယ်။ စာအုပ်လည်းအို၊ လူလည်းအိုပြီ၊ ဒါကို ခုထိ သိမ်းထားဆဲ တဲ့။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်က ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေပုံနဲ့အတူ။ အထက်တန်းကဗျာ လက်ရွေးစင်စာအုပ်လည်းပါတယ်။ ကျေးဇူး။
အထက်တန်းကဗျာစာအုပ် လက်ထဲမှာ ရှိ မရှိ စစ်ရဦးမယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့စာအုပ်။ အခုတော့ အလကားစာအုပ်ဖြစ်သွားပြီ။
တန်ဘိုးရှိတာ တွေဖျက်ဆီးပစ်တာအများကြီးပဲဆရာရယ်။ မြန်မာစာ အဆင့်အတန်းလည်း ဖျက်ဆီးခံရပါတယ်။
ကျွန်တော့်မှာတော့ မြန်မာကဗျာ လက်ရွေးစင် (အလယ်တန်း) စာအုပ်ရှိတယ်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာထုတ်တယ်။
စာမျက်နှာ (၁၄) မှာ လောကသာရပျို့ (ရခိုင်သူမြတ်) ပါတယ်။
၁၃။ ထုံးတီးနည်းနာ၊ အဖြာဖြာ၌၊ ပညာရှာမှီး၊ မကြီးသက်ရွယ်၊ အငယ်သော်က၊ ကြိုးလုံ့လလျက်၊ တုပ်ကွပုဆစ်၊ ဆရာစစ်၌၊ ကြောက်ချစ်ရိုသေ၊ လုပ်ကြွေးထွေဖြင့်၊ စာပေတတ်ကြောင်း၊ တချောင်းချောင်းလျှင်၊
ခြိမ်းမောင်းသည်းခံ၊ ဆရာ့ထံ၌၊ သင်အံကျက်လေ့၊ တနေ့တပါး၊ မှတ်သားလေလေ၊ ဝမ်းထဲခွေ၍၊ အထွေအထူး၊ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို။ ။ ဆည်းပူးသန့်ရှင်း ကြွယ်စေမင်း။
လောကသာရပျို့ကို ကန်တော်မင်းကျောင်းဆရာတော် ရေးသားခဲ့ပြီး၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်က ထုတ်တဲ့ စာအုပ်က ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်က ဟံသာဝတီတိုက်ကထုတ်နဲ့ နည်းနည်းလေး ကွဲလွဲတယ်။
ထုံးတီးနည်းနာ၊ အဖြာဖြာ၌၊ ပညာရှာမှီး၊ မကြီးသက်ရွယ်၊ အငယ်သော်က၊ ကြိုးလုံ့လ၍။ နှိမ့်ချပုဆစ်၊ ဆရာစစ်၌၊ ကြောက်ချစ်ရိုသေ၊ လုပ်ကြွေးထွေဖြင့်၊ စာပေတတ်ကြောင်း၊ တချောင်းချောင်းလျှင်၊ ဆဲမောင်းသည်းခံ၊ ဆရာ့ထံ၌။ သင်အံကျက်လေ့။ တနေ့တပါး၊ မှတ်သားလေလေ၊ ဝမ်းထဲခွေ၍၊ အထွေအထူး၊ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို။ ။ ဆည်းပူးသိမြင် ကြွယ်စေမင်း။
မူကွဲ နှစ်ခုလုံးမှာ တစ်ချောင်းချောင်းလျှင် မဟုတ်ပါ။ တစ်နေ့တစ်ပါး မဟုတ်ပါ။ ကျောင်းသုံး မြန်မာကဗျာ လက်ရွေးစင်ထဲမှာ ကန်တော်မင်းကျောင်းဆရာတော်ကို ဆရာလုပ်ထားတယ်။ မလုပ်ကောင်းပါ။
ပဌမ၊ သူတပါးနဲ့ တဆဲ့ငါးသတ်ပုံတွေကို တင်ပြပါတယ်။
မုံရွေးဆရာတော်ဘုရား စီရင်ရေးသားပါတယ်။ ဟံသာဝတီတိုက်က ၁၉၅၃ ခုမှာ ထုတ်တယ်။
အဆီအနှစ်အပြည့်ပါတဲ့စာတွေကို သတ်ပုံမှန်နဲ့သာ ရေးသားထုတ်ဝေတဲ့ခေတ်ဆိုတာ ရှိခဲ့ပါါတယ်။
ဆရာ တခုမေးချင်လို့ဗျ ရန်ကုန်မှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဖြန်းတဲ့ အချိန်မှာ တချို့က ထုံးတွေပါ ဖြူးကြပါတယ်။ ထုံးက ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်လား အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလားမေးချင်လို့ပါ မြန်မာ အယူအဆ အရ တခုခုဆို ထုံးသုတ်တာ ထုံးဖြူးတာ ထုံးစည်းတားတွေ နဲ့ ရောထွေးနေကြလို့လား လို့ပါ ကယ်စီယန်ဓာတ်က ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်နိုင်သလားပေါ့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် အလုပ်အတွက် အင်တာဗျူး လိုချင်လို့ပါ။
ငယ်ငယ်က မုံရွာက ရုပ်ရှင်ရုံတွေကို သတိရတယ်။ မြဟေဝန်၊ မြစန္ဒာ၊ မြို့မနဲ့ နေဝင်း။ ကန်တော့။ ရှူပေါက်တဲ့နေရာမှာ ထုံးဖြူးထာတယ်။ နမိုးနီးယားနံ့နဲ့ ရောနေတယ်။
ထုံးဆိုတာ ဓါတုဗေဒလို calcium oxide (CaO) ကယ်လ်စီယမ်အောက်ဆိုဒ် ဖြစ်တယ်။ Lime နဲ့ Quicklime လို့ခေါ်တယ်။ limestone ထုံးကျောက် ခေါ် calcium carbonate (CaCO3) ကို above 825 °C (1,517 °F) မီးသင့်ပြီး ရလာတာ။ လေနဲ့ထိတွေ့ပြီး ဓါတ်ပြောင်းတယ်။ Alkaline အယ်လ်ကာလီဓါတ်ဖြစ်တယ်။ လောင်စေနိုင်တယ်။ Powdered lime အမှုန့်ဖြူးထားနည်းလည်း လုပ်တယ်။
Cleaning သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းနဲ့ Disinfection ပိုးသန့်ခြင်း မတူပါ။ အခုခေတ်မှာ ထုံးကို disinfectant ပိုးသန့်ဆေးအဖြစ် မသုံးကြတော့ပါ။ သားသတ်လုပ်ငန်းတွေမှာ ပိုးသန့်ဖို့ သုံးတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးမှာသုံးတယ်။ ထုံးနဲ့ ရေနဲ့ တွေ့ရင် အလွန်ပြင်းတဲ့ ဓါတ်ပြုမှုဖြစ်လို့ သတိထားရတယ်။ ရှူမိရင်၊ စိုနေတဲ့အရေပြားနဲ့ မျက်စိကို ထိခိုက်မယ်။ ချောင်းဆိုးမယ်။ နှာချေမယ်။ အသက်ရှူရ ခက်မယ်။ မျက်ရည်ကျမယ်။ နှာခေါင်းထဲက အကန့်ကို လောင်စေမယ်။ ဗိုက်နာမယ်။ ပျို့အန်မယ်။
Disinfectants ခေါ်ပိုးသေစေရာမှာသုံးတာတွေတိုင်းက သတိထားရတယ်။ ပန်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ spores ခေါ် အကာခွံကို မသေစေနိုင်ကြပါ။ ဥပမာ မေးခိုင်ပိုးနဲ့ ဒေါင့်သန်းရောဂါပိုး။ Formaldehyde ဖေါ်မယ်လ်ဒီဟိုဒ်ဆိုရင် ကင်ဆာဖြစ်မလားအထိ သတိထားရတယ်။
ပိုးသန့်ခြင်းဆိုတာ ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ပိုးတွေကို သေစေအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ အစားအသောက်တွေ တင်ထားတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေကို အရင် သန့်ရှင်းပေးပြီးနောက် ပိုးသေစေရတယ်။
Disinfection ပိုးသန့်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးသုံးစရာတွေ
၁။ Bleach ဘလိခ်ျ ခေါ် ချွတ်ဆေး၊
၂။ hydrogen peroxide ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်။
၃။ vinegar ဗနီဂါ။
၄။ lemon or lime juice သံပုရာရည်။
၁။ Chlorine bleach (0.0314% sodium hypochlorite) ကလိုရင်းချွတ်ဆေးကို 1 tsp လက်ဖက်ရည ၁ ဇွန်းနဲ့ ရေ ၁ ကွာတ ရောရမယ်။ ရောထားတာကို အသစ်အသစ်ဖျော်ပါ။ တခြားဟာဆေးနဲ့မှ မရောပါနဲ့။
၂။ Hydrogen peroxide (3%) ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကို သည်အတိုင်းသုံးပါ။ နေရာင်နဲ့ထိရင် ဓါတ်ပျယ်တယ်။
၃။ White vinegar (5% acetic acid) ဗနီဂါက Listeria monocytogenes ပိုနဲ့ E. coli ပိုးတွေကို နိုင်တယ်။ 55◦ C မှာ ၁ မိနစ်ကြာ။
၄။ Lemon/lime juice (5% citric acid) သုံပုရာရည်။ Listeria monocytogenes နဲ့ E. coli ပိုးတွေကို နိုင်တယ်။ 55◦ C မှာ ၁၀ မိနစ်ထားပါ။ Salmonella typhimurium ခေါ် တိုက်ဖွိုက်ပိုးအတွက် 55◦ C မှာ ၁၀ မိနစ်ထားပါ။
မျက်နှာပြင်တွေသန့်ရှင်းရေးအတွက် ဆပ်ပြာကောင်းတယ်။ ပိုးသေစေအောင် ဘလိခ်ျ ခေါ် ချွတ်ဆေးကို ရေနဲ့ရော သုံးနိုင်တယ်။ အိမ်တွင်း ရုံးတွင်း ကျောင်းတွင်း အလုပ်ရုံတွင်း မျက်နှာပြင်တွေ အတွက် သုံးရတယ်။ ပို့သန့်ဆေးတွေက Lyzol Disinfectant Spray နဲ့ Clorox Healthcare Citrace Hospital Disinfectant & Deodorizer, Aerosol Spray တွေဖြစ်တယ်။
ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးကာလ ကလောင်တလက်၏ အခန်း
တက်တိုးရေးတဲ့စာအုပ် ၁၉၆၉ ခုနှစ်ကထုတ်တယ်။
ခုတော့ ခေတ်လည်း ထပ်ပြောင်းတယ်။ သတ်ပုံလည်း ပြောင်းလိုက်ပြီ။
ကျွန်တော် ပြည်ပနိုင်ငံရေးတာဝန်နဲ့ တီမောလက်စ်ကို နှစ်ခေါက်ရောက်ပါတယ်။ ပဌမကြိမ်က တပတ်နဲ့ နောက်တကြိမ်က တလကြာတယ်။ တီမောသွားတိုင်း ဂျကာတာနဲ့ ဘာလီကျွန်းမှာ အသွားအပြန် တညအိပ်ရတယ်။
တီမောမှာ ဘရိတ်ဖတ်စ်ကတော့ ဟော်တယ်ကကျွေးတယ်။ တနေ့လာဒါ။ နေ့စာတနပ် ညစာတနပ် စားသောက်ဆိုင်မှာ စားရတယ်။ တမင်းကြော်ကို ၃-၄ ဒေါ်လာပေးရတယ်။ တနေ့လာဒါ။
ပုံထဲက ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ နေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်တယ်။ အဖေါ်မပါ။ အဲဒီခေတ်မှာ ကင်မရာပါတဲ့ ဖုန်ုးလည်း မပေါ်သေးပါ။ နိုင်ငံရေးအရလည်း ကိုယ်လုပ်နေတာတွေ အကုန်တင်ပြလို့မရခဲ့တဲ့ခေတ် ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ပနိုင်ငံရေး ၂၄ နှစ်မှာ ပင်လယ်ကမ်းခြေ လမ်းလျှောက်ရတာ အကောင်းဆုံးရက်တွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်မှာ ထောက်လှမ်းရေးမပါ။ မိသားစုကတော့ နယူးဒေလီမှာကျန်ရစ်တယ်။
Cuban doctors go to South Africa ကျူးဘားဆရာဝန်တွေ တောင်အာဖရိကကို ကရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါအတွက် စေလွတ်
၂၆-၄-၂၀၂၀ နေ့က သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျူးဘားနိုင်ငံဟာ ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့ အမေရိကန်ရန်ပြုမှုတွေနဲ့ ထင်ရှားပါတယ်။ ကျွန်တော် အရှေ့တီမော ခေါ် တီမောလက်စ် နိုင်ငံမှာ တလကြာ ပြည်ပနိုင်ငံရေးတာဝန်နဲ့ သွားနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ ကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေးကို သတိထားမိလာတယ်။ တီမောကဆေးကျောင်းသားတွေ ကျူးဘားသွား သင်ယူကြတယ်။ ကျူးဘားဆရာဝန်တွေကလည်း အရှေ့တီမောဆေးရုံတွေမှာလာလုပ်ကြတာ တွေ့ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေ့က တီမောဆေးကျောင်းသာတယောက် ကျူဘားမှာဆုံးသွားလို့ ပြန်သယ်လာတာနဲ့ လေဆိပ်မှာ ကြုံရသေးတယ်။
ကျွန်တော် တီမောလက်စ်ကို နှစ်ခေါက်ရောက်ပါတယ်။ ပဌမကြိမ်က တပတ်နဲ့ နောက်တကြိမ်က တလကြာတယ်။ အဲဒီကိုသွားချင်ရင် သူ့ကိုအရင်ကအုပ်စိုးခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဘာလီကျွန်း ဒင်ပါဆာလေဆိပ်ကနေ လေယာဉ်နဲ့သာ သွားရတယ်။ မြေပုံမှာ နီးတယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ ဂျားဗားကနေ (၃) နာရီခွဲ ကောင်းကောင်း လေယာဉ် စီးရတယ်။ အဝင်ဗီဇာကြေး ဒေါ်လာ (၃ဝ) ပေးရလို့ အင်ဒိုနီးရှား ဗီဇာကြေးထက် (၃) ဆများတယ်။ လူတွေက ဖေါ်ရွေကြပါတယ်။ တီမောမှာတော့ လမ်းမှာလူစိမ်းတွေ့ရင် ကလေး-လူကြီး၊ ယောက်ျား-မိန်းမ နှုတ်ဆက်ဖေါ်ရကြတယ်။ အသားအရေ ညိုသူကများတယ်။ မျိုးဗီဇနဲ့ ပင်လယ်ရေ-ပင်လယ်လေကြောင့်လည်း ပါမယ်။
ပြောတဲ့ဘာသာစကားက ပေါ်တူဂီနှင့် တက်တူး ခေါ်ဒေသခံစကားဖြစ်ပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလည်း အသုံးချနိုင်တယ်။ စားသောက်ဆိုင် စားပွဲထိုးမိန်းကလေးကို အင်္ဂလိပ်လိုမှာလို့ရတယ်။ တက်စီသမားတွေနဲ့လည်း အဲလိုပဲ။ အမျိုးသမီးတွေ အလုပ်လုပ်နေကြတာက ထိုင်းနိုင်ငံလောက်နီးပါး ဖြစ်နိုင်တယ်။ အိမ်တွင်းပုန်းလေ့ရှိတဲ့ အိန္ဒိယထက် အများကြီးသာတယ်။
ပိုက်ဆံကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုသုံးသည်။ ခပ်ဝါဝါအရောင်ရှိတဲ့ တီမောကွိုင် ဒေါ်လာသုံးရလို့ အမ်းရတောရ လွယ်စေတယ်။ ဘဏ်စနစ် အတော်လိုသေးတယ်။ ဘဏ်နှစ်ခုသာရှိတယ်။ ဝန်ဆောင်ခသက်သာတဲ့ဘဏ်က လူတန်းစီရပြီး၊ အေအင်ဇက် ဘဏ်ကလူများတယ်။ အစစဈေးကြီးတယ်။ စားသောက်ဆိုင်မှာ အသားငါးထမင်းကျော်၊ ခေါက်ဆွဲကျော်တပွဲ လေးဒေါ်လာခွဲ အနည်းဆုံးပေးရတယ်။ တိုက်ဂါးဘီယာတဗူး တစ်ဒေါ်လာခွဲ၊ ယောက်ျားလေး ဆံပင်ဖြတ်ရင် ၅ ဒေါ်လာ။ စတိုးဆိုင်ခေါ် မီနီမားကက်ရှိလို့ ဈေးဝယ်ရလွယ်ကူတယ်။
တီမောရဲတွေကိုတော့ သြစတေးလျကနေလာပြီး၊ သင်တန်းပေးပါတယ်။ သြစတေးလျရဲအရာရှိတွေတည်းကြတဲ့ ဟော်တယ်မှာပဲ ကျွန်တော်ကတည်းရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဖက်မှာ ကျူးဘားဆရာဝန်တွေ အများကြီးလာကြတာ တွေ့ပါတယ်။ ဟာဗားနားဆေးကျောင်းသွားပြီးစာသင်ကြတယ်။ ကွန်မြူနစ်စနစ်ကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ပေါ်တူကီစကား ပြောကြလို့ ထင်ပါတယ်။
သူတို့နိုင်ငံ ဆင်းရဲပါတယ်။ သမတက ကျွန်တော်တို့ အစိုးရကို ကူညီချင်ပေမယ့် ငွေမရှိပါ။ ကျွန်တော်ရုံးဖွင့်ရင်လည်း ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှ ငွေမကူပါ။ အဲတာနဲ့ ကိုယ်တတ်တဲ့ဆေးပညာနဲ့ အလုပ်လုပ်ရင်း ရုံးစရိတ်ရအောင် လုပ်မယ်ဆိုပြီး တီမောကျန်းမာရေးဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ခွင့်တောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တလနဲ့သာ အပြီး ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သွားစဉ်က တီမောသမတ ရားမို့စ် ဟော်တာ ကိုယ်တိုင် နေ့လည်စာကျွေးပါတယ်။ ပင်လယ်ကမ်းနားနဲ့ မနီးမဝေး မြန်မာစားသောက်ဆိုင်မှာပါ။ စားလို့သောက်လို့ကောင်းပါတယ်။ ခရီးစဉ်သတင်းနဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး မထုတ်ပြန်ပါ။ ခင်မင်နေတဲ့ အာရ်အက်ဖ်အေ သတင်းထောက်တယောက်သာ သတင်းတချို့သွားတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ အဲဒီအချိန်မှာ တီမော က အာစီယန်ထဲဝင်ဘို့ကြိုးစားနေတယ်။ ရားမို့စ် ဟော်တာကနေ ဒီမိုကရေစီရေးကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းထောက်ခံတာရယ်၊ ကျွန်တော်တို့ အဝေးရောက်ညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို ရုံးခန်းဖွင့်ခွင့်ပေးမယ်လို့ ပြောတာရယ်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့က အားနာနေရတယ်။ ကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ် တယောက်တည်း သွားနေရတော့ ဝန်ကြီးချုပ် ဆနာနား နဲ့ပါတွေ့ပါတယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော်တို့က အဲလိုစောင့်ထိန်းကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရကလည်း တီမောက အာစီယန်ထဲဝင်ချင်တာကို ကန့်ကွက်ထားတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ရားမို့စ် ဟော်တာ က အမေရိကန်ကနေ မြန်မာပြည်ကို ဆန်ရှင်လုပ်ထားတာကို သဘောမတူကြောင်းပြောလာတယ်။ ကျွန်တော်က သူ့အပြောကို သဘောမတူပါ။ ကျွန်တော့်ဟော်တယ်စရိတ်ကို သမတရုံးကကျခံပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခုတော့ တီမောမှာ ခေါင်းဆောင်းအပြောင်းအလဲတွေရှိနေပြီ။ တိုင်းပြည်ကတော့ ဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာသလဲ သိပ်မသိပါ။ ကျွန်တော်သွားစဉ်က ဟော်တယ်ကနေ လေဆိပ်အသွားမြင်ရတာတွေဟာ မြန်မာပြည် ဆင်ခြေဖုံးရပ်ထဲ ဖြတ်သွားရတာနဲ့ မခြားပါ။ တီမောနိုင်ငံ တိုးတက်ပါစေ။
Remdesivir ဗိုင်းရပ်စ်ဆေး ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါအတွက် အရေးပေါ်အသုံးပြုရန်
Remdesivir ဗိုင်းရပ်စ်ဆေးကို ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါအတွက် အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် အမေရိကန် FDA ကနေ ထုတ်ပြန်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
စမ်းသပ်ကုသပေးနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ NIAID အင်းစတီကျုဒါရိုက်တာ Dr Anthony Fauci နဲ့ သမတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဆို့က အလားအလာ ကောင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လူနာတွေ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာချိန် သုံးပုံတပုံလောက်နီးပါး ရက်တိုစေတာ တွေ့ရတယ်။
Gilead Sciences ဆေးကုမ္ပဏီကနေထုတ်တဲ့ဆေးဖြစ်တယ်။ Ebola အီဘိုလာဖြစ်စဉ်ကလည်း သုံးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အတည်ပြုချက်ရတဲ့အထိ မရောက်ခဲ့ပါ။ Gilead ကနေ သီးသန့် လူနာ ၃၉၇ ယောက်ကို စမ်းပေးခဲ့တယ်။ ဆေးကို ၅ ရက်ကနေ ၁၀ ရက်ပေးတယ်။ လူနာဦးရေတဝက်မကကို ဆေးရုံကနေ ၁၄ ရက်နဲ့ ဆင်းပေးနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်။
တရုပ်ပြည်မှာစမ်းပေးတော့ အလာအလာ မကောင်းခဲ့တာတွေ့ရတယ်။
Dr Fauci ကတော့ ၃၁% တိုးတက်မှုဆိုတာ ၁၀၀% လိုတော့ မကောင်းလှပါလို့ဆိုပါတယ်။ အတိုင်းအတာတခုထိတော့ ကောင်းတယ်။ ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကုသဆေးတွေသတင်းက အမျိုးမျိုးတက်နေတာကို သတိပြုရပါမယ်။
Khin Maung Sann ရေးဆွဲတဲ့ RIT ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ ရေဆေးပန်းချီဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ဆေးမန်းကျောင်းပုံ ဆွဲခဲ့ဖူးတာ ရှာမတွေ့တော့ပါ။ ၁၉၇၃ ခုထုတ် ကျောင်းမဂ္ဂဇင်းအဖုံးမှာ။
မန္တလေးဆေးကျောင်း မဂ္ဂဇင်းအဖုံးတွေစုထားတဲ့သူဆီမှာလည်း အဲတာမရှိတဲ့။ အတွင်းသရုပ်ဖေါ်ပုံတွေပါ ဆွဲခဲ့ရတယ်။ ကျောင်းနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့က ပလက်ဖေါင်းပေါ်ကနေ ဆွဲခဲ့ရတယ်။
ကျွန်တော်က ဟောက်ဆာဂျင်ဖြစ်နေပြီ။ ခုနှစ်ကို မမေ့ပါ။ မဂ္ဂဇင်းဦးစီးထုတ်တဲ့ဆရာက မဆလ ပါတီပဌမအကြိမ်ညီလာခံ ကာလဖြစ်လို့ မဆလ လိုဂိုပါထည့်ဆွဲပေးခဲ့ရတယ်။ ပါတီနဲ့အတူ ကျွန်တော့်ပန်းချီပါ ပျောက်သွားပုံရတယ်။
ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဝူဟန်ဆေးရုံတွေရဲ့ လေထဲမှာတွေ့ရှိ
ပိုးတွေရဲ့ genetic markers ခေါ်မျိုးဗီဇလုပ်ပေးတာလို့ခေါ်တယ်။ airborne droplets ခေါ် လေမှုန်လေးတွေထဲမှာ တွေ့ရတယ်။ အရွယ်အစား ၁ လက္မရဲ့ တသောင်းပုံ ၁ ပုံသာရှိတယ်။
အရင်ကတော့ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာစမ်းတွေ့ခဲ့ရာကနေ အခုတော့ ဆေးရုံတွေထဲမှာတွေ့လာတာဖြစ်တယ်။ တွေ့ရှိချက်ကို တနင်္လာနေ့က ဂျာနယ်မှာ ထုတ်ပြန်တယ်။
အဲတာတွေပါနေတဲ့ လေကိုရှူလို့ ရောဂါကူးစက်နိုင်သလားတော့ ပြောမရသေးပါ။
ကွန်မင့်တခုရတယ်။ ကျေးဇူး။ လွှမ်းမိုဆိုတာအကြိုက်ဆုံးပါဆရာ ဒါပေသိ ရတုပိုဒ်ဆိုတာ သုံးနေရာလောက် မှားနေတာ သတိထားမိကတည်းက နောက်ထပ်နားမထောင်ဖြစ်တော့ပါ။
နတ်ရှင်နောင်သီချင်းမှာ ပြည်လှဖေထက် ပိုကောင်းတာမရှိ။ ဘယ်သီချင်း ဘယ်ရုပ်ရှင်မဆို မူရင်းကအကောင်းဆုံး။
သူများတိုင်းပြည်တွေကထုတ်တဲ့ အနုပညာတွေမှာလည်း မူရင်းကိုမီတာ သာတာရယ်လို့ အင်မတန်ရှားတယ်။
ရုပ်ရှင်မှာတော့ အသစ်တွေက စက်နဲ့ နည်းပညာတွေက ပိုကောင်းလာတာမှန်တယ်။ တေးဂီတမှာလည်း တူရိယာပစ္စည်းတွေကို ပိုကောင်းလာတာရှိပါမယ်။ အသံသွင်းစက်တွေ ပိုကောင်းလာတယ်။
ကျွန်တော့အမြင်က ရှေးကျတယ်။ မြစေတီကျောက်စာလို သဘောထားတယ်။ လက်ရေးလက်သား ဘယ်လောက် ပိုကောင်းနေနေ ကျောက်စာကို အသစ်ရေးရင် တန်ဖိုးမရှိလို့ ထင်နေတယ်။
ပြည်လှဖေ၊ ခင်မောင်ရင်၊ မမြရင်၊ မေရှင်၊ စတဲ့အဆိုတော်တွေ ကနေ့ထိ ရှင်နေကြတယ်လို့သာ မှတ်ထင်နေမိတယ်။ အများကြီးရှိပါတယ်။
နှင့်ေ ဆးကျောင်းမှာ မသင်ရတဲ့ဗေဒ
ခုနစ်နှစ်တိတိ နေ့ရောညပါ ဆေးမန်းမှာအတူတူပညာသင်ယူခဲ့ကြသူတွေနဲ့အတူ နေ့လယ်စာစားရင်းနဲ့ စကားတွေ ဖေါင်ဖွဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်က သူများတွေတင်စားကြသလို ဖေါင်ဖျက်ထွက်သွားသူတော့ မဟုတ်ပါ။ ဟုမ်းကို အရောက် ပြန်လာနိုင်သူ ဖြစ်တယ်။ ဟုမ်းဆိုတာ ပုလဲကအိမ်ကလေးတခုသာမဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်။
အဲဒီအိမ်မှာ ကျန်နေသေးသူတွေနဲ့ ပြန်ဆုံရချိန်မှာ မစောင့်နိုင်ကြသူတွေကိုပါ သတိရစေတယ်။ မဆုံရသေးသူတွေနဲ့လည်း လက်တကမ်းမှာ။
ကနေ့တွေ့သူတွေရဲ့ မှတ်ချက်တခုက ကျောင်းတုန်းက စကားလည်းများများပြောတဲ့သူမဟုတ်ဘဲ၊ နိုင်ငံရေးလုပ်တော့ ဘာတွေပြောတာလည်းတဲ့။ ဆေးကျောင်းမှာ မသင်ရတာတွေကို ပြောမိခဲ့တယ်။
ကျွန်တော် နိုင်ငံရေးနှင့်ပက်သက်ပြီးမေးချင်လို့ပါ။ နိုင်ငံခြားမှာ ဆရာဝန်တွေ နိုင်င်ငံရေးလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ နောက်တခုက ဦးနေဝင်း ခေတ်မှာ ဗကပကိုတိုက်ပြီး ဘာသူပုန်မှ မရှိဘူးဆိုတာနှင့် ပက်သက်ပြီး သိချင်ပါတယ်။
• နိုင်ငံရေးလုပ်လိုက သူ့နိုင်ငံဥပဒေတွေအတိုင်း ဘယ်သူမဆို လုပ်နိုင်။
• သူပုန်ဆိုတာ အစိုးရကိုတိုက်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးကို ခေါ်တယ်။ လက်နက်မရှိတဲ့ ၁၉၉၀ အမတ်တွေကိုလည်း သူပုန်လို့ ခေါ်တဲ့အခါ ခေါ်တယ်။
• အမည်အမျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ်။ အမည်ကတော့ သိပ်အရေးကြီးတာ မဟုတ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့က စကားလုံး အလွန်ရွေးချင်ကြတယ်။
• လွတ်လပ်ရေးမရခင် ၁၉၄၇ ကနေစတယ်။
• သခင်စိုးနဲ့ သခင်သန်းထွန်းတို့ခေတ် အတော်ကြာတယ်။ အဆုံးသတ်နည်းတွေ မတူကြ။
• တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ ကေအင်ဒီအိုကနေစတာ အခုနောက်ဆုံး အေအေအထိ။
• အဖွဲ့ပေါင်း ရေတွက်ဖို့ ခက်တယ်။ စာရင်းရှည်ကြီး လုပ်ထားတယ်။ လက်ရှိ။ ပျက်သွား။ မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေ။
• နောက်ထပ် ဘာတွေလာဦးမယ် မသိနိုင်။
• အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ လက်နှစ်လုံးသုံးလောက်ထူတဲ့ စာအုပ်ကြီးတွေထုတ်ထာတာရှိတယ်။ ကြာပြီဖြစ်လို့ နောက်ထပ် လက်နှစ်လုံး သုံးလုံးလောက်ထူတာ ထပ်ထုတ်ရဦးမယ်။
• ပြောရရင် အားနာစရာတွေ များတယ်။ အသက်အန္တရာယ်လည်း ရှိတယ်။
မိုး နှင့် သရက် အိုး နှင့်ကြွက်သို့ တိမ် နက်ရေတူ လေးမျိုးလူကို မှတ်ယူရိပ်မြွက် သိနိုင်ခက်၏။ (မန်လည်ဆရာတော်ကြီး မဃဒေဝ)
တောင်ကလာမှ မိုး၊ ဒေါင်ဒေါင်မြည်မှ အိုး။ သရက်သီးဆိုတာ ချိုမလိုလိုနဲ့ ချဉ်တတ်တယ်။ ကြွက်တွင်းကို ဘယ်ကစလို့ ဘယ်မှာဆုံး မသိနိုင်။
ခုခေတ်မြန်မာပြည်မှာတော့ ချိုတဲ့သရက်သီးကို ရွေးတတ်လာကြပြီ။ တခြားတိုင်းပြည်တွေမှာရတဲ့သရက်သီးတွေကတော့ မဃဒေဝလင်္ကာထဲကအတိုင်းပဲ။
ခုခေတ်မြန်မာပြည်မှာ လူကြွက်တွင်းတွေ ပိုများလာတယ်ထင်တယ်။ ရေအိုးကောင်းသုံးသူတော့ နည်းလာတယ် ထင်တယ်။
မိုးကောင်းပါစေသတည်း။ ချိုတဲ့သရက်သီး စိုက်ပျိုးစားသုံးနိုင်ကြပါစေသတည်း။ (တစ်)လုံးတွေ (တစ်)ငုံတွေနဲ့ ဝေးကြပါစေသတည်း။
Symptoms of Coronavirus ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါလက္ခဏာများ
နောက်ဆုံးသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကို ဖြည့်စွက်ရေးပါမယ်။ အမေရိကန် CDC အဆိုအရ ပိုးကူးစက်ခံရပြီး ၂ ရက်ကနေ ၁၄ ရက်အတွင်းမှာရောဂါလက္ခဏာတွေခံစားရမယ်။
9. အရသာ သို့မဟုတ် အနံ့ ပျက်လာခြင်း။
2. ရင်ဘတ်မှာ ဆက်တိုက် လေးလံနာလာခြင်း
3. စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း အိမ်ရာကမထလိုခြင်း
4. နှုတ်ခမ်း မျက်နှာပြာလာခြင်း
ဒိထက်စောတဲ့လေ့လာချက်တွေအရ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါလက္ခဏာများ
• ဖျား 83%
• ချောင်းဆိုး 82%
• အသက်ရှူမဝ 31%
• ကြွက်သာတွေနာ 11%
• စိတ်မကြည်လင် 9%
• ခေါင်းကိုက် 8%
• လည်ချောင်းနာ 5%
• နှာရည်ယို 4%
• ရင်ပတ်နာ 2%
• ဝမ်းပျက် 2%
• ပျို့အန် 1%
• ရောဂါလက္ခဏာတခုမကရှိသူ 90%
WHO ၁၂-၃-၂၀၂၀ နေ့ထုတ်ပြန်ချက်
American Medical Association ဂျာနယ်အရ ဆေးရုံတက်လူနာ ၉၈% မှာ အဖျားရှိတယ်။ ၇၆% ကနေ ၈၂% မှာ ချောင်းခြောက်ဆိုးတယ်။ ၁၁% ကနေ ၄၄% မှာ အားကုန်နေကြတယ်။
ဝူဟန်မှာ လေ့လာမှုတွေအရ အသက်အရွယ်အရ ၃၀ ကနေ ၇၉ နှစ်အတွင်းလူနာတွေမှာ ဆိုးဝါးတယ်။ နဂိုအခံရောဂါ ရှိသူတွေမှာ ဆိုးတယ်။ ဆိုးတယ်ဆိုတာ နူမိုးနီးယားဖြစ်တာ။
၁၆-၃-၂၀၂၀ နေ့က လ့လာချက်တွေအရ ကလေး ၂၀၀၀ ကူးစက်ခံကြရပြီး ၆% က ဆိုးတယ်။
ဟားဘဒ်တက္ကသိုလ်ကပညာရှင်တွေအဆိုအရ ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လာမဲ့နှစ်တွေအတွင်း ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၄၀% ကနေ ၇၀% အထိ ကူးစက်နိုင်တယ်။ ကူးစက်ခံရပေမဲ့ အများစုဟာ သာမန်လောက်သာခံစားကြရမယ်။ တချို့ ရောဂါမရှိသလို နေမယ်။
ည ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်။
ရေးထားတာ ၅ နှစ်ရှိပြီ။
Generic name ဆေးနာမည် Cetirizine နဲ့ Brand name ဆိုင်တင်နာမယ် Zyrtec စတဲ့ နာမည်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ (စီထရက်ဇင်း) ဟာ Antihistamines (အင်တီ-ဟစ်တမင်း) ဆေးခေါ်တယ်။ (အလာဂျီ) ရရင်ထွက်လာတဲ့ Histamines တွေကို တားဆီးပေးတယ်။ Histamine (H-1) receptor blockers လို့လဲ ခေါ်တယ်။ (အင်တီဟစ်တမင်း) ဆေးတွေထဲမှာ စတုတ္ထမျိုးဆက်ဆေး ဖြစ်တယ်။ နောက်ပေါ်လို့ ပြောရင် မှန်တယ်။ နောက်ပေါ်တာက ဘာထူးလဲဆိုရင် အိပ်ချင်စိတ် နည်းတယ်။ ဆေးအလေးချိန် 5mg နဲ့ 10mg စားဆေးဖြစ်တယ်။ ဆေးကို အစာနဲ့သောက်သင့်တယ်။ အစာနဲ့ဝေးလဲ ရပါတယ်။ Theophylline ဆေးနဲ့တွဲပေးရသူဆိုရင် Theophylline ကို လျှော့ပေးပါ။ ကလေးတွေကိုလဲ ပေးနိုင်တယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ၁၄% မှာ အိပ်ချင်တယ်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ ပျို့၊ ခေါင်းကိုက်၊ အားယုတ်၊ လည်ပင်းနာ။
ဒီစာတွေကိုလဲ တွဲဖတ်ပါ၊ လိုက်နာပါ။ ကြာရင် (အလာဂျီ) ကို ဆရာဝန်လိုသိသူ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်အကြောင်းကို သိပါ။
ဟိုဆီပင်ပေါ် သရက်မှာတည်း။ (ဇော်ဂျီ)
၁၉၃၂ ခု ဒီဇင်္ဘလာလထုတ် ဂန္ဓလောကမှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ကဗျာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံကို ရတာသာသုံးပါတယ်။
အမေရိကန်ဒုသမတ နှာခေါင်းစည်းမပါတဲ့သတင်း ရေးအပြီးမှာ အိမ်ချုပ်လက်ဖြစ် နှာခေါင်းစည်း အိမ်တိုင်ယာရောက် လာပေးတယ်။ ကျေးဇူး။
အိမ်ချုပ်လက်ဖြစ်လို့ ရေးပေမဲ့ အိမ်မှာ စက်နဲ့ချုပ်တာ။ စက်ကို လက်နဲ့သုံးရတာ။
လယ်ယာ၊ တောင်ယာ၊ ယာခင်း၊ လယ်ယာကိုင်းကျွန်း၊ အိပ်ရာ။
ကဆုန်ုလပြည့်နေ့ဟာ ဒီနှစ် မေလ (၆) ရက်မှာကျရောက်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်လို့ (ဆု၊ ဖွား၊ ပွင့်၊ စံ) လို့ မှတ်သားထားကြတယ်။ စု နဲ့ ဆု မှန်အောင်မရေးတတ်ကြသူတွေ သတိထားကြစေချင်တယ်။
ဆု = ဂေါတမဗုဒ္ဓအလောင်းဟာ သုမေဓာရှင်ရသေ့ဘဝက ဒီပင်္ကရာဗုဒ္ဓခြေတော်ရင်းမှာ ဆုပန်ခဲ့တယ်။
ဖွား = ဘုရားလောင်းဟာ မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈ ခု၊ ကဆုန်လပြည့်၊ သောကြာနေ့၊ လုမ္ဗိနီအင်ကြင်းတောမှာ ဖွားမြင်တော်မူခဲ့တယ်။
ပွင့် = ဘုရားလောင်းဟာ မဟာသက္ကရာဇ် ၁ဝ၃ ခု၊ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ သဗ္ဗညုဗုဒ္ဓအဖြစ်ရောက်တော်မူခဲ့တယ်။
စံ = ဂေါတမဗုဒ္ဓဟာ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ ခု၊ ကဆုန်လပြည့် အင်္ဂါနေ့မှာ ကုသိနာရုံဥယျာဉ်တော်မှာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော် မူခဲ့တယ်။
ကဆုန်လဘွဲ့ကို ဖိုးသူတော်ဦးမင်းက စပ်ဆိုထားပါတယ်။ စကားဝါငုံသင်းလို့ ကြယ်မင်းတဲ့ ဝိသာခါ၊ တိမ်ဗွေမှာ ရောင်ခြည်ရွှမ်း၊ ထွန်းတဲ့ချိန်ခါ၊ စုံကန္တာဟေမာမြိုင်ထဲ၊ ရွှေကျေးပျံသင်လို့၊ စံပျော်ရွှင် သည်ဟိုကူးလို့ငယ်၊ မြူးကြစမြဲ။
ကဆုန်လကို ပါဠိလို Vesākha ဝိသာခါလို့ခေါ်တယ်။ (ဆန်းစခရစ်) သင်္သကရိုက်လို Vaiśākha ခေါ်တယ်။ ကဆုန်လပြည့်နေ့ကို အင်္ဂလိပ်လို Buddha Purnima နဲ့ Buddha Day လို့ခေါ်တယ်။ ၁၉၅ဝ က သီရိလင်္ကာမှာကျင်းပတဲ့ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာညီလာခံကနေ ဗုဒ္ဓနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယ၊ တရုပ်၊ နီပေါ၊ သီရိလင်္ကာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ လာအိုနဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွေမှာ ဗုဒ္ဓနေ့သတ်မှတ်တာ နည်းနည်း ကွဲလွဲတယ်။
၁၉၅၄ ခုနှစ် ရန်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့ကွန်ဖရင့်၊ ၁၉၅၆ နီပေါမှာကျင်းပတဲ့ကွန်ဖရင့်၊ ၁၉၆၁ ဖနွမ်းပင်မှာ ကျင်းပတဲ့ကွန်ဖရင့်၊ ၁၉၇၆ ထိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ကွန်ဖရင့်တွေကနေ ဗုဒ္ဓနေ့သတ်မှတ်မှုကို ခိုင်မာစေခဲ့တယ်။ ကုလသမဂ္ဂကနေ ၁၃-၁၂-၁၉၉၉ နေ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၇၄ နဲ့ Vesak Universal Holiday လို့သတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်။ Wesak လို့လည်း ရေးတာတွေ့ရတယ်။
လယ်တီဆရာတော်ကြီးရေးသားခဲ့တဲ့ လင်္ကာတချို့ကို အခုထိအလွတ်ရပါသေးတယ်။ သန္ဓေယူခါ၊ ဆယ်လကြာသော်၊ မဟာသက္ကရာဇ်၊ ခြောက်ဆယ့်ရှစ်ကြုံ၊ ကဆုန်လပြည့်၊ သောကြာနေ့ဝယ်၊ ချမ်းမြေ့စုံစီ၊ လုမ္ဗိနီ၌၊ မဟီလှိုက်ဆူ။ ဖွားတော်မူသည်၊ နတ်လူအောင်မြို့ လမ်းပါကို။
အမေရိန်ကန် ဒုသမတ မိုက်ပင့်စ် ဆေးရုံကိုသွားတာ နှာခေါင်းစည်းမပါ
အခုတက်နေတဲ့ ဘရိကင်းနယူးစ် ဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ပင့်စ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ အင်ဒီယာနာပြည်နယ် ဂါဗာနာ ကနေ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကရွေးလို့ ဒုတိယသမတဖြစ်နေသူ။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်း လက်ရှိ အင်ဒီယာနာပြည်နယ်က ကွန်ဂရက်မင်းတယောက်က ပြောခဲ့သေးတယ်။ ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့် စီးပွါးရေးကျဆင်းတာနဲ့စာရင် လူတွေသေဆုံးရခြင်းဟာ အသေးစား မကောင်းဆိုးဝါးသာ ဖြစ်ပါသတဲ့။
ကျွန်တော်က ဆရာဝန်၊ နိုင်ငံရေးထဲလည်း ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကို နိုင်ငံရေးလုပ်တာကို ဆန့်ကျင်တယ်။
ကရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကာကွယ်ရေးဆောင်ပုဒ်တခုက ကိုယ့်ကြောင့် သူများတွေ ဒုက္ခမရောက်စေနဲ့၊ အိမ်မှာသာနေပါတဲ့။
မမှန်ကန်တဲ့ကာကွယ်နည်းကို လူတကာသိအောင် လှည့်ပြတာဟာ သူများတွေကို ဒုက္ခရောက်စေနိုင်တယ်။ နှာခေါင်းစည်း မတပ်လို့ လူတထောင်မှာ တယောက်သာရောဂါကူးစက်ကောင်း ကူးစက်မယ်။ အဲဒီတယောက်က ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ် စာဖတ်နေသူဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခ။ ရီပတ်ဘလီကန်တွေ ဒုက္ခမဟုတ်။
တက်တိုးရေးတဲ့စာအုပ်၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာ ထုတ်တယ်။
တက်တိုးက မြန်မာစာလည်းတတ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလည်း အဘိဓါန်ထုတ်တယ်။
သမိုင်းအကြောင်း မကြာမကြာ မေးကြတယ်။ အဲလိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိတာ အလွန်ကောင်းတယ်။ အားပေးတယ်။ ဒီစာမှာ နောက်ထပ်အမြင်တခုနဲ့ ရေးပါမယ်။
သမိုင်းဆိုတာ မှတ်တမ်းဖြစ်တယ်။ ကျောက်စာကနေ စတယ်။ အဆင့်ဆင့်။ ခုခေတ်တော့ အင်တာနက်မှာ တင်ကြတယ်။ ကျောက်စာ၊ ပေစာတွေကိုသာ နောက်လူတွေက ပြင်မရ။ စက္ကူပေါ်ရေးထားခဲ့တာကို ပြန်ထုတ်တော့ ပြင်ရေးကြတယ်။ လွဲကုန်ပြီ။ အဲတာ သမိုင်းမဟုတ်။ ကွန်ပြူတာခေတ်မှာ ပြင်ကြတာ အဆိုးဆုံး။ ထင်တာရေး ပြင်နေကြတယ်။ မှားကုန်ပြီ။ အဲတာ သမိုင်းမဟုတ်။
သမိုင်းနောက်ခံတွေကို စာရေးဖွဲ့ဆိုကြတယ်။ ကဗျာလင်္ကာသီချင်း သီကုံးကြတယ်။ ဇာတ်အဖြစ် ကပြကြတယ်။ ရုပ်ရှင် ရိုက်ကြတယ်။ ဖတ်ကောင်းအောင်၊ ရသပေါ်လွင်အောင်၊ နားထောင်ရ ကြည့်တဲ့သူတွေ စွဲလမ်းနှစ်သက်အောင် အပိုအဆာတွေ ထည့်ကြတယ်။ အတော်များများ လွဲကုန်တယ်။ အဲတာ သမိုင်းမဟုတ်။
ခေတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ ဥပမာ ဇာတိမာန်၊ ကိုယ့်အစိုးရ အထောက်အကူပြုရေး။ မွှမ်းတာတွေပါ ထည့်ရေးကြတယ်။ မမှန်တော့ပါ။ အဲတာ သမိုင်းမဟုတ်။
စာပေတန်ဖိုး၊ အနုပညာတန်ဖိုး၊ နိုင်ငံရေးတန်ဖိုးတွေအရတော့ သူ့နေရာနဲ့သူ အသုံးကျပါတယ်။ ပယ်ပါလို့ မပြောပါ။ သမိုင်းကို သိလိုသူကတော့ အဖြစ်ကို ထုတ်ယူကြရမယ်။ ခက်တယ်။ ဘာသာရေးစာတွေလည်း အတူတူ။ ဒီစာမှာ ထည့်မရေးလိုပါ။
အချက်လက်မှန်တွေကို ထုတ်ယူလို့ရပြီးတဲ့နောက်မှာ ကိုယ့်သမိုင်း ညံ့ခဲ့ မှားခဲ့တာတွေကို အမျိုးမတော်ချင်လို့တော့ မရတာကိုလည်း သိရမယ်။ တော်ခဲ့လွန်းတယ်လို့ ထင်စေအောင်လုပ်ထားတာကိုတော့ ဆက်ပြီးသိတ်ကူးမယဉ်ပါနဲ့တော့။
ခုခေတ် ရေစစ်မသုံးကြတော့တာ ခက်တယ်။
ဆရာ သင်ခန်းစာနဲ့ သင်ခဏ်းစာနဲ့မှာ ဘယ်ဟာ အမှန်ပါလဲ။
အရင်သတ်ပုံစာအုပ်ဟောင်းတချို့မှာ သင်ခဏ်းစာလို့သုံးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သင်ခန်းစာလို့သာရေးတယ်။ ကျောင်းသင်္ခမ်းကတမျိုး မတူပါ။
လူလေး သွားချင်စမ်း။ (ဇော်ဂျီ)
ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ကဗျာတွေကို တင်ထားကြတွေမှာရော ထပ်ထုတ်စာအုပ်တွေမှာပါ သတ်ပုံတွေ မှားနေကြတယ်။ အဲလို မလုပ်ကောင်းပါ။
အေးရိပ်သာတဲ့ ပညောင်ညိုက မူကွဲဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ဆရာ ခင်ဗျား ဘန်ကောက်မြို့က အမှန်လား ဗန်ကောက်မြို့က အမှန်လား ဘယ်အရာက အမှန်ပါလည်းဆရာ
Bangkok ကို အသံထွက်အရ ရေးတာဖြစ်လို့ အသံထွက်နီးစပ်တာ မှန်တယ်။ နိုင်ငံခြားက တခြားအမည်တွေလည်း အဲလိုပဲ။ အစဉ်အဆက်ရေးသားလာတွေကိုတော့ ဆက်သုံးသင့်တယ်။ မူကွဲတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။
၂။ နာမည်တွေ မွေးစား စာလုံးတွေက အနီးစပ်ဆုံးအသံထွက်ဖြစ်ရင် အဆင်ပြေတယ်ဆို ဟုတ်လားဆရာ။
အစဉ်အလာအသုံးများတာတချို့ကိုတော့ မပြင်သင့်ပါ။ ပြင်သင့်တာတွေက ပိုများတယ်။
ဘာသာခြားစာလုံးတွေကို မြန်မာပြန်ရာမှာပါ အဆင့်တွေနဲ့ရေးလာခဲ့ကြတယ်။ အင်္ဂလိပ်၊ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အစ္စရေး၊ ဣသရေလ၊ စသည်။ အဲတာတွေကို အဆင့်မပါဘဲရေးလည်း သတ်ပုံပျက်စရာမရှိပါ။
စွယ်စုံကျမ်းထဲပါ စာလုံးတချို့ကိုလည်း ပြောင်းရေးလာကြတယ်။ ဂျူးလယပ်ဆီဇာ၊ ဆအူးဒီအာရေဗျ၊ ဆိုက်ဗီးရီးယား၊ ယန်ဆီမြစ်၊ ရှီကာဂိုး၊ ဗဲလဂျီယမ်၊ ကွန်မျူနစ်၊ တီဗီရောဂါ စသည်။ ပြောင်းလာတာတွေက ပိုနီးစပ်တယ်။
ကွန်မျူနစ်နဲ့ ကွန်မြူနစ်၊ ကွန်ပြူတာနဲ့ ကွန်ပျူတာ အသံထွက်တူတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်စေတဲ့ပိုး Dengue ကို ဒန်ဂူးလို့ ထွက်ရင် ရေးရင် မမှန်။ ဒန်ဂေး။ အာထွာစောင်း မှားတယ်။ အာထွာဆောင်း မှန်တယ်။ စူပါ မှားတယ်။ ဆူပါ။
တူရကီကို တာရ်ကီ၊ ပေါ်တူကီကို ပေါ်တူဂယ်လ်ကပိုသင့်တယ်။ အမေရိကန်၊ အမေရိက၊ အမေရိကား၊ အင်္ဂလန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဗြိတိန်၊ ဗြီတိသျှ၊ ဘရစ်တိန်၊ ဘရစ်တစ်ရှ်၊ စတာတွေမှာ နာမ်နဲ့ နာမဝိသေသန မမှားသင့်။ ဖရင့်စ် ကို ပြင်သစ်လို့ အစဉ်အဆက်ရေးလာတာကို ပြင်ဖို့ ခက်မယ်။
ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို ဒေါ်နာထရန့်လို့ရေးရင် မှားတယ်။ အိုဘားမားကို အိုဗားမားလို့ရေးတာကို မှားတယ် ပြောမရ။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်တွေက ဘာရက်ကိုဘားမားလို့ အသံထွက်ကြတယ်။
အင်္ဂလိပ်လို့ ရေးနေကြပေမဲ့ ယုဒသန်အဘိဓာန်မှာ အင်္ဂလိက်လို့ရေးတယ်။ Judson’s English Burmese Dictionary အင်္ဂလိတ် မြမ္မာ အဘိဓာန်စာအုပ် ၁၈၇၇ မှာ ထုတ်တယ်။ အဲဒီအဘိဓာန်အဆိုအရ
July = အင်္ဂလိပ်နှစ်တွင် သတ္တမလတည်းဟူသော ဇုလိဟု ရွေ့လျော၍ ခေါ်ဝေါ်သော ယုတိလ။
June = အင်္ဂလိပ်နှစ်တွင် ဆဌမလတည်းဟူသော ဇွန်လ။
Judson ဂျတ်ဆင်ကို ယုဒဿန်လို့ ရေးကြပြန်တယ်။ မသင့်ပါ။
ဂျွန်လလို့ရေးပြန်ရင် လူနာမည်နဲ့ တူသွားမယ်။ မြန်မာဘာသာစကားမဟုတ်တာကို ရယူထားတဲ့စာလုံးတွေကို အနီးစပ်ဆုံး ရေးထားတာကို သတ်ပုံမှားတယ်လို့ မပြောသင့်ပါ။ အစဉ်အလာရေးခဲ့ကြတာကိုလည်း လေးစားသင့်တယ်။
ရှုတ်ထွေး နဲ့ ရှုပ်ထွေး ဘယ်ဟာအမှန်လဲ ဆရာ
လေပြင်းတိုက်၍ သံလိုက်ဆွဲအားများ၏စာထဲမှာ ရှုပ်ထွေးကေို တသတ်ထားခဲ့တာ မှားတယ်။ ကျွန်တော်က မကြာခဏ မှားတယ်။ ဆောရီး။
ဘေးကရှိုတ်သည် (ဘန်းစကား၊ ပိုးပမ်းသည်)
ရှုပ်နေတဲ့ အမယ်ဘုတ်ရဲ့ခြည်ခင်ကို ကျနော်တို့တတွေ ဝိုင်းရှင်းပေးတာ ပြီးခါနီးပါပြီဗျ
၂၀၂၀ နှစ်မေလဟာ မြန်မာပြက္ခဒိန်အရ ၁၃၈၂ ခု၊ ကဆုန်လဆန်း (၁၀) ရက်ကနေ နယုန်လဆန်း (၁၀) ရက်အထိ ဖြစ်တယ်။ မေလလို့ နာမည်ရလာတာက ဂရိနတ်သမီး Maia (မိုင်ယာ) ဆိုတဲ့ မျိုးပွားခြင်းနတ်သမီးဖြစ်တယ်။ တိုက်ဆိုင်တာက မြန်မာ (၁၂) ရာသီခွင်ဟာ မေလနောက်ပိုင်းမှာ မေထုန်ရာသီဖြစ်နေတယ်။
မေလ (၁) ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံအမျိုးမျိုးမှာ ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်တွေအမျိုးမျိုး ကျင်းပကြတယ်။
မေလ (၁) = May Day (Labor Day; International Workers' Day) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားနေ့
မေလ (၃) = ပိုလန်နဲ့ ဂျပန် ဖွဲ့စည်းပုံနေ့။
မေလ (၃) = World Press Freedom Day ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့။
မေလ (၄) = ဒိန်းမတ် (နာဇီဂျာမဏီလက်အောက်က) လွတ်မြောက်ခြင်းနေ့။
မေလ (၅) = နယ်သာလင် (နာဇီဂျာမဏီလက်အောက်က) လွတ်မြောက်ခြင်းနေ့။
မေလ (၅) = ဂျပန်နဲ့ ကိုရီးယား ကလေးများနေ့။
မေလ (၅) = National Teacher Day အမျိုးသားဆရာနေ့
မေလ (၉) = Europe Day (အီးယူ) ဥရောပနေ့။
မေလ (၁၀) = မက်ဆီကို၊ ဂွာတီမာလာ၊ အယ်လ်ဆာဗာဒို အမေလနေ့။
မေလ (၁၀) = (ဒုတိယတနင်္ဂနွေ) အမေရိကန် အမေများနေ့။
မေလ (၁၃) = IEEE Global Engineering Day ကမ္ဘာ့အင်ဂျင်နီယာနေ့။
မေလ (၁၅) = International Day of Families မိသားစုများနေ့။
မေလ (၁၇) = နော်ဝေနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံနေ့။
မေလ (၁၈) = International Day of Capitalism နိုင်ငံတကာ အရင်းရှင်စနစ်နေ့။
မေလ (၁၈) = International Museum Day နိုင်ငံတကာပြတိုက်နေ့။
မေလ (၁၈) = Victoria Day ဗစ်တိုရီးယာနေ့။
မေလ (၂၁) = World Day for Cultural Diversity ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားမှုနေ့။
မေလ (၂၂) = International Day for Biological Diversity နိုင်ငံတကာ ဇီဝမျိုးကွဲပြားမှုနေ့။
မေလ (၂၃) = World Turtle Day ကမ္ဘာ့လိပ်နေ့။
မေလ (၂၅) = Towel Day တဘက် (ပုဝါ) နေ့။
မေလ (၂၅) = လက်ဘနွန်လွတ်မြောက်ခြင်းနေ့။ အာဂျင်တီးနားတော်လှန်ရေးနေ့။ ဂိုင်ယာနာလွတ်လပ်ရေးနေ့။
မေလ (၂၅) = Memorial Day အောက်မေ့ဘွယ်နေ့။
မေလ (၂၈) = နီပေါသမတနိုင်ငံနေ့။
မေလ (၅) = International Midwives Day နိုင်ငံတကာ ဝမ်းဆွဲဆရာမများနေ့။
မေလ (၈) = World Red Cross and Red Crescent Day နိုင်ငံကတာ ကြက်ခြေနီနေ့
မေလ (၁၀) = World Lupus Day ကမ္ဘာ့ (လူးပတ်စ်) ရောဂါနေ့။
မေလ (၁၂) = International Nurses Day နိုင်ငံတကာသူနာပြုများနေ့။
မေလ (၁၂) = International Awareness Day for Chronic Immunological and Neurological Diseases နိုင်ငံတကာ နာတာရှည် ခုခံအားနှင့်အာရုံကြောရောဂါများ အသိပေးလှုံ့ဆော်ရေးနေ့။
မေလ (၂၄) = World Schizophrenia Day ကမ္ဘာ့ (စကစ်ဆိုဖရီးနီးယား) စိတ်ရောဂါနေ့။
မေလ (၃၁) = World No-Tobacco Day ကမ္ဘာ့ဆေးလိပ်ဆန့်ကျင်ရေးနေ့။
• Asian American Heritage Month အာရှနွယ်ဖွားအမေရိကန်လ။
• Asian Pacific American Heritage Month အာရှ-ပစိဖိတ် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်လ။
• Celiac Awareness Month (စီလိယက်) ရောဂါ အသိပညာပေးလ။
• Cystic Fibrosis Awareness Month (ဆစ်စတစ်ဖိုက်ဘရိုးဆစ်) အသိပညာပေးလ။
• Haitian Heritage Month ဟေတီ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်လ။
• Hepatitis Awareness Month အသည်းရောင်ရောဂါ အသိပညာပေးလ။
• Jewish American Heritage Month အမေရိကန်-ဂျူး ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်လ။
• Mental Health Awareness Month စိတ်ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးလ။
• National ALS Awareness Month (အေအယ်လ်အက်စ်) ရောဂါ အသိပညာပေးလ။
• National Bike Month in the United States စက်ဘီးစီးလ။
• National Brain Tumor Awareness Month ဦးနှောက်ကင်ဆာ အသိပညာပေးလ။
• National Electrical Safety Month လျှပ်စစ် စိတ်ချရမှုလ။
• National Golf Month ဂေါက်သီးလ။
• National Masturbation Month in the United States ဖါသာအာသာဖြေခြင်းလ။
• National Osteoporosis Month အရိုးအားနည်းရောဂါ အသိပညာပေးလ။
• National Pet Month အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လ။
• National Smile Month ယူကေနိုင်ငံ ပြုံးရယ်ခြင်းလ။
• National Stroke Awareness Month (ဆထုပ်) ရခြင်း အသိပညာပေးလ။
• National Water Safety Month ရေစိတ်ချရမှုလ။
• New Zealand Music Month နယူးဇီလန် တေးဂီတလ။
• Skin Cancer Awareness Month အရေပြားကင်ဆာ အသိပညာပေးလ။
• South Asian Heritage Month တောင်အာရှ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်လ။
• Virgin Mary အပျိုစင်မေရီလ (ကက်သလစ်)
- မေ (၄) Audrey Hepburn ရုပ်ရှင်မင်းသမီး မော်ဒရီ ဟပ်ဘမ်း (1929-1993)
- မေ (၁၇) Queen Victoria ဗစ်တိုရီးယာ ဘုရင်မ (1819-1901)
- မေ (၂၆) John Wayne ရုပ်ရှင်မင်းသား ဂျွန် ဝိန်း (1907-1979)
- မေ (၂၉) John F. Kennedy အမေရိကန်သမတ ဂျွန် အက်ဖ် ကနေဒီ (1917-1963)
Mayflower မေဖလားဝါးဆိုတဲ့ သင်္ဘောကြီးနဲ့ အင်္ဂလန်ကခွဲထွက်သူတွေဟာ ကမ္ဘာသစ် အမေရိကားကို ၁၆၂ဝ မှာ ခရီးထွက်ခဲ့တဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်က ခုထိနာမည်ကြီးပါတယ်။ ၂ဝဝ၂ တုံးက ဟောလီဝုဒ်က May ဆိုတဲ့ ကြောက်စရာ ရုပ်ရှင်ကား ရိုက်ပါတယ်။ မေလထဲမှာ မင်္ဂလာမဆောင်သင့်ဘူးလို့ တချို့အမေရိကန်တွေက ယူဆကြတယ်။ ရှေးအင်္ဂလိပ်တွေက မေလထဲမှာ နွားနို့သုံးကြိမ်ညှစ်လို့ ရနိုင်တယ်လို့ ယူဆကြတယ်။
- မေလကျောက်မျက်ရတနာ = Emerald မြ (အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ ချစ်မေတ္တာ)။
- မေလပန်း = Lily of the Valley လွင်ပြင် လီလီပန်း။
- ကဆုန်လပန်း = စကားဝါပန်း၊ နယုန်လပန်း = စံပယ်ပန်း။
- ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင် = Taurus ပြိဿ (မေလ ၂ဝ အထိ)၊ Gemini မေလထုန် (မေလ ၂၁ မှ)။
- မေလ (၁) ရက် = အလုပ်သမားနေ့
- မေလ (၆) ရက် = ကဆုန်လပြည့်နေ့ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်
- မေလ (၂၇) ရက် ၁၉၉၀ = ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ နှစ်ပတ်လည်နေ့။
- မေလ (၃၀) ရက် ၂၀၀၃ = ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းနေ့။
Stay Home ကာလမှာ စာအုပ်တွေ တစ်ဝကြီးဖတ်ဖို့ တဲ့။
သတ်ပုံမှားတွေတော့ မဖတ်ချင်။ အဝတစ်နေလို့ ကြော်ငြာထားတယ်။ ရောဂါရစေမယ်။
စစ်အစိုးရခေတ်ထုတ်သတ်ပုံစာအုပ်မှာကို တဝ ကို တဝလို့သာပါတယ်။ ကြော်ငြာသူတွေက ဘယ်သတ်ပုံစာအုပ်ကို လက်ကိုင်ထားကြသလဲ မသိ။ စာအုပ် ၆၀၀၀ လုံး အသုံးမကျဖြစ်သွားပြီ။ နှမျောစရာ။
ဆရာအခုလိုအကြံဉာဏ်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် - လိုတာယူပြီး မလိုတာ မှားတာ လွဲတာ ဖယ်ကြရမှာပေါ့။
သူ့ဘေးနာက ခွါဖြူပင်ငုတ်ကလည်း အတက်လေးတွေ ထွက်ကြလာပြီ။
ပန်းတို့သည် လူကိုဖြစ်သောရောဂါပိုးကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြပေသည်။
ပင်ပန်း ပန်းပင်လို့ သတ်ပုံသင်ပေးတဲ့ မြန်မာစာဆရာကို အမှတ်ရနေသည်။
ဆရာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဟော်မုန်းအမျိုးအစား ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲဆရာ ဘယ်ဟော်မုန်းကဘယ်လိုတွေအလုပ်လုပ်ပါလဲဆရာ မသိလို့ပါဗျာ ကျေးဇူးပါ
Hormones ဟော်မုန်းဆိုတာ လူ့ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဓါတ်တမျိုးဖြစ်တယ်။ မရှိမဖြစ်ပါ။ အသုံးကျတာတွေအများကြီး။ ချို့တဲ့သူ လွန်ကဲသူတွေ မူမမှန်ဖြစ်မယ်။ အသက်မရှည်နိုင်။ endocrine glands ခေါ် ဂလင်းတွေကနေ ထုတ်ပေးနေတယ်။ ပြွန်မပါတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ သွေးထဲကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးတယ်။ ဖွံ့ထွားဖို့၊ ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေ၊ လိင်မှုနဲ့ မျိုးပွါးခြင်း၊ ဆီးချို၊ ကိုယ်ဝန်၊ စသည်။
1. Hormones of Thyroid လည်ပင်းကြီဒဟော်မုန်းများ
Triiodothyronine (T3) နဲ့ Thyroxine (T4) လို့ခေါ်တယ်။
2. Insulin အင်စူလင်
သရက်ရွက်နေထုတ်ပေးတယ်။ သွေးထဲကသကြားဓါတ်ကို ပုံမှန်ဖြစ်နေစေအောင်ထိန်းပေးတယ်။
3. Estrogen အီစထိုဂျင်
အမျိုးသမီးဟော်မုန်းလို့ခေါ်ကြတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာလည်း နည်းနည်းလေးရှိတယ်။အမျိုးသမီးတွေ လစဉ်ရာသီ၊ မျိုးပွါးခြင်းအတွက်လုပ်ပေးတယ်။ များရင်မကောင်း။
4. Progesterone ပရိုဂျက်စတီရုန်း
မျိုးဥအိမ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိရင်အချင်းကနေ ထုတ်ပေးတယ်။
5. Prolactin ပရိုလက်တင်
နို့ရည်ထွက်တာနဲ့ဆိုင်တယ်။ များရင် မကောင်း။
6. Testosterone တက်စတိုစတီရုန်း
ယောက်ျားဟော်မုန်းလို့ခေါ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာလည်း နည်းနည်းရှိတယ်။
7. Serotonin ဆီရိုတိုနင်
8. Cortisol ကော်တီဇော်
ကျောက်ကပ်အထက်မှာရှိတဲ့ အဒရီနယ်လ်ဂလင်းကနေ ထုတ်ပေးတယ်။ ရုပ်ပိုင်းရော စိတ်ပိုင်းနဲပါဆိုင်တယ်။ ဆေးအဖြစ် သုံးရာတာမနည်းပါ။
9. Adrenaline အဒရီနယ်လင်
ကျောက်ကပ်အထက်မှာရှိတဲ့ အဒရီနယ်လ်ဂလင်းကနေ ထုတ်ပေးတယ်။ အရေးပေါ်ဟော်မုန်းလို့လည်းခေါ်တယ်။
10. Growth Hormone ကြီးထွားမှုဟော်မုန်း
ဒီနွေအတွက် တမာရွက် ပဌမဆုံးစားရတဲ့ရက်။ ငပိချက်နဲ့။ ရေခဲခမ်းထဲသိမ်းထားရတဲ့ ဆီးဖြူသီး။ အမဲသားပြုပ်ထောင်း။ ပဲကြီးဟင်းချို အလာကို မစောင့်ပဲ ပုံရိုက်လိုက်ပါတယ်။ တမာရွက်က တပေါင်ကို ၂၀ တဲ့။
အရှေ့ကနေရောင်လာ၏အောက်မှာ ကွန်မင့်တခု ရတယ်။ ကျေးဇူး။ ဖတ်ရတာ ကြက်သီးများပင် ထပါသည်ဆရာ (ကြက်သီး - စာလုံးပေါင်းမှားသွားရင် သည်းခံပေးပါဆရာ)။ ယခုခေတ် ကျွန်တော်တို့လူငယ်အများစု အသိပညာ ယဉ်ကျေးမှုများ ပျောက်ကွယ်နေကြပါပြီ။
လူတွေ ဘာကြောင့် ကြက်သီးထကြသလဲ။ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေတခုခုကြောင့် အရေပြားက ကိုယ်မွေးလေးတွေ ထောင်မတ်လာကြတယ်။ အရေပြားကလည်း ဘဲအရေပြား ကြက်အရေပြားလိုဖြစ်လာတယ်။ ရာသီဥတုကြောင့်လည်း ဖြစ်တယ်။ အဲလိုဖြစ်လို့ ကိုယ်ခန္ဓာအပူချိန်တက်လာစေတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ သီချင်းကောင်းတပုဒ်ကို နားဆင်ရချိန်မျိုးမှာလည်း ဖြစ်တယ်။
ကြောက်စရာ လန့်စရာ တခုခုကို မြင်တွေ့ ကြားသိတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာထဲက Adrenaline အဒရီနလင်ဟော်မုန်း ထွက်လာတယ်။ Physiology of emotions စိတ်လှုပ်ရှာမှုရဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်လို့ ခေါ်တယ်။
တခါတခါ Butterflies in the stomach ဗိုက်ထဲမှာ လိပ်ပြာတောင်ပံခတ်သလို ခံစားကြရနိုင်တယ်။
ရာသီဥတုသာယာနေချိန်၊ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းနဲ့ အမြည်းလေးစား အနားယူနေချိန်မှာ ကိုယ်ငယ်ငယ်တုန်းက အမေတို့ အဖွါးတို့ခေတ်က သီချင်းလေးတပုဒ်ကို ကြားမိတာနဲ့ ငယ်ဘဝကို သတိရပြီး ကြက်သည်းထလာတတ်ကြတယ်။ အမေတို့ အဖွါးတို့ကို သတိရတယ်။